Sidee Loogu Dhaliyaa Goolasha Guusha Ciyaarta E-Ganacsiga | Martech Zone
Sida Loogu Guuleysto Hadafka Guusha Ciyaarta E-Ganacsiga
Intii lagu jiray Koobka Adduunka waxaa jiri kara hal guuleyste, shirkado badan ayaa la kulmi kara guulaha ciyaarta e-Ganacsiga. Waxaa jira xeelado la xaqiijiyay oo ka caawiyay dukaamada inay dhibco helaan. Xigasho wuxuu ku tusayaa sida loo ciyaaro ciyaartooyda ugu fiican iyo in la abuuro qorshe ciyaar firfircoon si ganacsigaaga e-commerce uu guriga ugu keeno guul.
Kahor inta uusan xilli ciyaareedku bilaabmin, kooxaha waa inay marka hore maalgashadaan ciyaartoy sar sare. Markay tahay ganacsiga elektarooniga ah 5 10 ka mid ah 56ka maalgashi ee tafaariiqleyda ugu muhiimsani waxay ku jiraan suuqgeynta. 51% ganacsatadu waxay maalgashadaan suuqgeynta mashiinka raadinta iyo helitaanka macaamiisha, 48% haynta macaamiisha, 42% bogagga muhiimka ah ee hagaagay, iyo XNUMX% SEO. Xogta hoose ee hoose, Xigasho wuxuu soo bandhigayaa xogta laga helay Daraasadda Sannadlaha ee 14aad, oo muujineysa halka ganacsatadu maalgashadayaan, sida ay u arkaan isbeddelka rabitaanka iyo baahiyaha dukaanka, iyo istiraatiijiyado keena ROI-yada ugu weyn.
Tags: iibinta wadistae-commerceiibinta ecommerceganacsiga elektarooniga ahROIKoobka adduunka 2014
5 Siyaabood oo Suuq-u-dhowaansho Ku-saleysan ayaa Saameyn Ku Iibsaneysa Iibsashada Macaamiisha
Sida loo Xulo Xalinta otomaatiga Iibka
Simon Daacad Commerce
Jul 21, 2014 markay ahayd 3:38 AM
Waxaan u bartay waxyaabo badan oo cusub oo ku saabsan goobta e-commerce oo waxaan ahay nacalad hubaa inay tani wax badan iga caawin doonto. Waxaan jeclaa muuqaalka aqoonta halkan oo aan ku shaqeyn doonaa isla.